सुधारको दिशामा शेयर बजार
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । शेयर बजारको प्राविधिक विश्लेषणले यस्तो देखाएको हो ।
लगातार तीन दिन ओरालो लागेर २४ अंक घटेको शेयर बजार सूचकांक २६ भदौमा ६.७७ अंक बढेको छ । शेयर बजारमा लगातार घटेपछि बढ्नु स्वभाविक हुन्छ । तर यसको प्राविधिक विश्लेषणले बजार बढ्ने संभावनालाई समेत संकेत गरेको छ ।
३१ साउनमा नेप्से १२१० अंकमा पुगेर प्रतिरोध विन्दु बनाएको थियो । त्यसपछि लगातार बढेर २० भदौमा १२३४ अंकमा पुगेको नेप्से त्यसयता ओरालो लागेर २५ भदौमा १२१० अंकमै टेवा परीक्षण गरेको छ ।
२६ भदौको ब्यापारले शेयर सूचकांक उकालो धकेलेपछि नेप्से आउँदा दिनमा बढ्ने संभावना देखिएको हो । अघिल्लो प्रतिरोधविन्दुमा टेवा पाउँदा नेप्से बढ्ने प्राविधिक विश्लेषण गरिन्छ ।
वित्त कम्पनी र जीवन बीमाबाहेक सबै समूहगत परिसूचक उकालो लागेपछि मंगलवार, २६ भदौमा नेप्से १२१७.६५ अंकमा पुगेको छ । ४१७० पटक भएको ब्यापारमा १६८ कम्पनीका ११ लाख १३ हजार कित्ता शेयर रु. ३३ करोड ४२ लाखमा कारोबार भयो ।
यस दिन एनआईसी एसिया ब्यांकको सर्वाधिक रु. २ करोड ७४ लाख ५० हजारको शेयर ब्यापार भएको छ । सर्वाधिक कमाउने अर्थात् महँगिएको शेयरको सूचीमा किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था अगाडि छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य भने सर्बाधिक सस्तिएको छ ।